Izifo zangasese: Prevention, Izimpawu kanye Ukwelashwa
izifo zangasese - izifo okuyinto ezimweni eziningi adluliswa ngokusebenzisa olungavikelekile ubuhlobo bobulili kwanoma yiluphi uhlobo. Ngokwezibalo, lo esivame kakhulu ukutheleleka ngegciwane owesifazane evela kumuntu kunalokhu okuphambene nalokho. Okuvame kakhulu izifo zangasese: gardnerella, herpes igciwane, ureaplasma, mycoplasma urogenital, chlamydia, cytomegalovirus.
Izimpawu ezibonisa okuthelelana ngesifo esidluliselwa ngocansi zihlanganisa ukulunywa kanye nobuhlungu ikhomishana echama futhi ngesikhathi socansi, ububomvu ka nolwelwesi lwamafinyila we umthondo. Kanye izilonda ezincane shashaza endaweni zangasese laphezu kwazo kulotshiwe ngokwamazwi zichithe nge nephunga ezingezinhle.
Phezu ukuthola lezi zimpawu ngokushesha kufanele ubone udokotela futhi bahlolelwe izifo zangasese, ngesikhathi okuzothatha swab ukuhlonza ejenti causative. Kulesi sisekelo, udokotela imithi ukwelapha ngalokufanele nangalokulungile, ezosiza ukugwema eziyingozi. Futhi benza ucwaningo wegazi i-HIV, ugcunsula kanye viral ukusha kwesibindi kohlobo B no-C
izifo zangasese chithi ngommango:
Isigaba 1. Kwenzeka Ukunqotshwa kwe-urethra kwaphetha ngokuthi amadoda kanye wesibeletho kanye emomozini - kwabesifazane. Lesi sigaba ngokuvamile libhekene kumiswa ukuguguleka wesibeletho.
Isigaba 2. In amadoda, ukutheleleka isakazekela wesinye izinso, abesifazane - ku kwesibeletho futhi ezihlobene yayo, futhi ngomgudu womchamo.
Isinyathelo 3. Ngo abesifazane, ukuvuvukala kwesibeletho futhi ezihlobene esiholela ifomu okungamahlalakhona, yakha ukuvuvukala kule amashubhu. Abesilisa abalomkhuhlane prostatitis okungamahlalakhona, okuyinto kuhambisana kuwukwephula isidoda kumiswa. Iziguli bangezwa: stomatitis, conjunctivitis, cystitis, pyelonephritis.
Umphumela eyinhloko izifo zobulili kwabesilisa nabesifazane, kuyinto nenzalo. Kukhona esengozini yokungenwa yigciwane le-HIV, i-hepatitis B noma C Ngakho-ke, kumelwe kukhunjulwe ukuthi nobuntu self-ephulukisa lezi zifo, futhi ukunyamalala ezinye zezimpawu athi ukuthi isifo uye wathuthela ifomu esicashile. Ukuze uvimbele lokhu, ukwelashwa kufanele kube ngesikhathi esifanele.
Njengomthetho, ukwelapha izifo zangasese kusekelwe antibiotic, immunomodulators, futhi hepatic. Uma lesi sifo has izinkinga ngemva kokuhlinzwa, therapy ukusetshenziswa laser, Physiotherapy kanye nezinqubo ultrasound. Ngempumelelo futhi umphumela ukwelashwa ixhomeke isikhathi sokwelashwa iseluleko lesiguli yezokwelapha, ku ekuhambisaneni nayo yonke izincomo kanye ebekwe efaneleyo venereologist.
Ukuze bazivikele ezifweni zazo ngocansi ngokuthintana ngocansi, kubalulekile ukuba nophathini oyedwa wocansi. Uma usabhekene le izinsolo kancane khona STD, kufanele ngokushesha kudokotela futhi ahlolwe ngokuphelele.
Akufanele sibakhohlwe ukuthi kudlule bonke ukuhlolwa ezidingekayo babe bobabili abalingani, ngenye indlela kabusha ukutheleleka kungenzeka. nokusetshenziswa kwekhondomu futhi kwezindlela ezikahle ekuvimbeleni izifo ezithathelwana ngobulili.
Isilonda 12 duodenal isilonda: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Ukwelashwa warts kwabesifazane
Izinkinga okuqukethwe sokufundiswa umongo yeziNdawo ezingamaGugu KD Ushinsky
Ostrovsky Square Petersburg
Butch Ukudla: incazelo, ukubuyekezwa, imenyu
Abanikazi of the "Ball Golden" - abadlali best eYurophu
Indlebe Imigudu: izimbangela nokususwa
Indlela ukuqeda cellulite phezu imilenze: ukubuyekeza izindlela
Izinhlobo ezinjengenyanga kwabesilisa nabesifazane. Yiziphi izinhlobo ezinjengenyanga?
Indlela ukulungiselela ukuhlolwa: Amathiphu umfundi ebona